Malunga Nathi-Fuzhou Henghua New Material Co., Ltd.
DOT / idayimane ipatheni PP Spunbond Nonwoven
Ipatheni yomnqamlezo PP Spunbond Nonwoven
Anti-bacterial umlinganiswa PP Spunbond Nonwoven
Anti-static uphawu PP Spunbond Nonwoven
Anti-UV umlinganiswa PP Spunbond Nonwoven
Idangatye elibuyiswa ngumlinganiswa PP Spunbond Nonwoven
Ukumelana nokukrazuka / Ilaphu leSpunbond elinokuqina okuphezulu
yePackage & Inshorensi
Sisebenza ngokukhethekileyo ekwenzeni amalaphu akumgangatho ophezulu wePP we-spunbond angalukwanga, anenkunzi eninzi kunye nezixhobo ezitsha zemveliso ezitsha.
I-Henghua Nonwoven yasekwa ngo-2004.With 17+ iminyaka yamava kwi-PP Spunbond Field.we yenye yeefektri zokuvelisa ze-nonwovens ezigqwesileyo e-China, kwaye umzi-mveliso wam ngowona mkhulu eFuzhou.
Ukulawulwa komgangatho ongqongqo kumgangatho we-ISO9001: 2015 kunye ne-SGS.
Sinemigca ye-6 yokuvelisa kunye nomthamo wemveliso yeetoni ezingama-900 / ngenyanga, abasebenzi abayi-100, abanokuqinisekisa ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nokunxibelelana ngexesha elifanelekileyo iinkcukacha zee-odolo.
Iqela lethu kunye neNkonzo
Umbuzo wakho onxulumene neemveliso zethu uya kuphendulwa kwiiyure ze-24. Abasebenzi abaqeqeshwe kakuhle nabanamava ukuphendula yonke imibuzo yakho.
Ngomgaqo-nkqubo wemarike "Ukuthengiswa ngokukhawuleza kunye neeNzuzo ezincinci", sinethemba lokuba sinokusebenzisana nabo bonke abathengi kwaye sibambe amathuba emarike. Sikholelwa ukuba iFuzhou Heng Hua New Material Co., Ltd iya kuba lolona khetho lwakho lungcono.
Izixhobo zonyango kunye nempilo: iigawuni zotyando ezilahlwayo, iikepusi, iimaski, iimpahla zangaphantsi.
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla: Iibhegi zokuthenga, iibhegi eziphathwayo, iibhegi zeCD, iidyasi zemvula, ilaphu letafile, izigqubuthelo zesuti, iintente, amanqaku okuhamba alahlwayo, izigqubuthelo zemoto, izinto zokuhombisa zangaphakathi, izihlangu zokudibanisa izinto.
Ukusetyenziswa kwefenitshala: izigqubuthelo zesofa, izigqubuthelo zomandlalo
I-Fuzhou Henghua New Material Co., Ltd. ngumenzi we-100% Polypropylene Spunbonded Non-Loven Fabrics. Inkampani yethu yasekwa ngo-2004 notyalo-mali olungaphezu kwe-USD 8,000,000. Siqeshe abasebenzi abangaphezu kwe-100 kwaye sineworkshop ye-15,000-square-metres. Ngemali eninzi kunye nezixhobo ezitsha zokuvelisa, sinokubonelela ngamalaphu aziwayo kunye nomgangatho ophezulu ongalukiweyo kubathengi abavela kulo lonke ihlabathi.Nyaka ngamnye, sivelisa iitoni ezili-10,000 zomgangatho ophezulu we-160/240/260cm ububanzi obuyi-10-250gsm. I-100% ye-polypropylene ephothiweyo ngamalaphu angalukwanga, asebenzayo kwezolimo, ukwenza iibhegi, iimpahla, izihlangu, iminqwazi, imihombiso yasekhaya, ifenitshala, iimveliso zotyando zogutyulo, kunye namanye amashishini. Ungalibazisi kuthi ndiyazi ukuba unombuzo.
Ilaphu elingalukwanga yimathiriyeli yesizukulwana esitsha evumelana nokusingqongileyo. Ineempawu zokuqinisekisa amanzi, ukungena komoya, ukuguquguquka, okungeyona ityhefu, i-nonirritant kwaye inemibala. Isetyenziswa ngokubanzi kumanqaku ezonyango, izinto zococeko lomntu, iimveliso zemizi-mveliso, amanqaku emihla ngemihla, amanqaku ezolimo, iingxowa zokupakisha, amanqaku okulala, umsebenzi wezandla, amanqaku okuhombisa, izixhobo zasekhaya, amanqaku okhuseleko lokusingqongileyo ngokubanzi.
Sivelisa inkonzo eyenzelwe wena.
Umbala: 200+ cebisa imibala ukuba uchole. Ixhasa imibala elungiselelweyo.
Umzi-mveliso wethu kufutshane ne-Fuzhou port kunye ne-Xiamen port, wamkele utyelelo lwakho okanye ukubonisana!
Iindlela eziphambili zokusebenzisa iilaphu ezingalukwanga zinikwe ngezantsi
Nonwoven for iibhegi
Ayilukwanga enepateni yamachaphaza
Izinto ezingalukwanga, Ilaphu elingalukwanga, Ilaphu eliNgalukwanga Pp, ilaphu elingalukwanga, Ilaphu lePolypropylene iSpunbond eNgalukiweyo, Ilaphu lePolypropylene Non-Loven,